Yonke Ngezilwanyana ezihlala kwiClass Asteroidea
Izilwanyana kunye Nendalo Iiprofayili zezilwanyana
I-Asteroidea Iklassi equkethe i-Starfish kunye nezinye ii-Invertebrates
Nangona igama elithi "Asteroidea," lingaqhelekanga, iimeko eziqulethweyo mhlawumbi zikhona. I-Asteroidea iquka iinkwenkwezi zasolwandle, ezibizwa ngokuba yi- starfish . Ngeentlobo ezi-1,800 eziyaziwayo, iinkwenkwezi zaselwandle zininzi ngobukhulu, imibala kwaye zineendlela eziqhelekileyo ezingaselwandle.
Izixhobo kwiClass Asteroidea zineengalo eziliqela (ngokuqhelekileyo phakathi kwe-5 no-40) zilungiselelwe nge-disk ephakathi.
I-Asteroidea Water Water System
Idiski ephakathi iqukethe i-madreporite, imvula evumela amanzi kwi-system astroid water system. Ukuba nenkqubo yeesetyhula yamanzi kuthetha ukuba iinkwenkwezi zaselwandle azinalo igazi, kodwa zizise amanzi nge-madreporite yazo kwaye zihambise kwiindidi zamanzi, apho zisetyenziselwa ukuqhubela iinyawo zabo ezinyawo.
UBukumkani : i- Animalia
I-Phylum : Echinodermata
Iklasi : Asteroidea
I-Asteroidea yaziwa ngokuba yi "yeenkwenkwezi zokwenyaniso," kwaye ziseklasini eyahlukileyo ezivela kwiinkwenkwezi ezinobungqingili, ezichazwe ngakumbi phakathi kweengalo zabo kunye nediski yazo ephakathi.
Indawo kunye nokuSasazwa
I-Asteroidea inokufumaneka kwiindawo zaselwandle ezijikeleze ihlabathi, ezihlala kwiindawo ezininzi eziphantsi kwamanzi, ukusuka kwindawo ephakathi kwamanzi ukuya elwandle olwandle .
I-Asteroids ixhamla kwezinye iindawo, ngokuqhelekileyo izilwanyana ezinobunzima ezifana ne-barnacles ne-mussels. Noko ke, isithsaba-se-thorn starfish, nokho, kubangela umonakalo omkhulu ngenxa yamadwala e- coral .
Umlomo we-asteroid usekho ngaphantsi kwayo. Uninzi lwe-asteroids luxhaphaza ngokukhupha isisu kunye nokugaya ixhoba ngaphandle komzimba wabo.
I-Asteroids inokuvelisa ngesondo okanye ngokuxhomekeka. Kukho iinkwenkwezi zaselwandle kunye nabesifazane, kodwa azibonakali. Ezi zilwanyana zizalisa ngesondo ngokukhulula umdaka okanye amaqanda emanzini, apho, emva kokuchumisa, ziba izibhulu zokubhukuda ezikhululekileyo eziza kuhlaselwa elwandle.
I-asteroids ivelisa ngokutsha ngokutsha kwakhona. Kungenzeka ukuba inkwenkwezi yezilwandle ukuba ingabuyiselanga kuphela ingalo kodwa iphinda iphantse yonke umzimba wayo ukuba ubuncinane isahlulo se-disc star star.
Echinoderms: I-Starfish, i-Sand dollar kunye ne-Sea Urchins
Kutheni ama-Whales aMaMzimba kunye neeNkobe
Iintlobo zeMpawu zoTywala
Funda ngoBomi kunye namaxesha e-Worm Tree
Iinkcazelo zeNdlovu (Segun Mirounga)
Konke NgoGrimpoteuthis, iDumbo Octopus
10 Iimpawu NgeeWrruses
Isingeniso kwiClass Echinoidea
Iintlobo zamaLwandle oLwandle-Uluhlu lweeNxweme zoLwandle
Iifudu ze-Sea Turtle - Iifoto ze-Turtles Sea
IiKlabhu zeGrafu ze-Junior Length Junior
Iingozi zezempilo ze-Chromium-6
I-Country Music Hall yeFame
Ungazikhumbula njani Itheyibhile yePeriodic
Yintoni amaRoma endlela?
Madam CJ Walker: Inventor, Entrepreneur, Philanthropist
Ingqwalaselo yeeSonto zeMormon kwiTattoos
Izindlela Ezinkulu Zokugubha Izingane Nezingane
Ukulwa neentlanzi zeCheerleaders
Iintsuku ezili-12 zeeKrisimesi
Imizi yaseLoto Bay, eMexico: Igalari yezithombe
Ingakanani iMelika eye yatshintsha ukususela ngowe-1900?
I-Biography kaJohn Wesley, uMququzeli weCawa waseMethodist
Ukubhalwa kwesivakalisi esibanzi
Isalathisi esifelayo Inkcazo kunye nemizekelo
Iimfihlelo zeMhlaba oMileyo
Fumana iifayile ezilinganayo - Iifom
Indlela Yokubhala Umxholo
Yonke NgeTempile yamaHindu
Inkcazo yeSiseko esiSiseko kunye nemizekelo
Ukufaka i-MySQL kwi-Mac
Konke ngeFanele Mustang GT CS
'Umlimi kwiDhords' Chords
Intaba ye-Bike ebizwa ngokuba yi-All-Mountain